Njani ukwakha ezinzima budlelwane. Bomgangatho Icacile
Oku intetho ethe elahlukileyo inkcazelo ngokunxulumene partners: nokuzinikela, honesty, exclusivity okanye loyalty. A romanticcomment budlelwane, uninzi kwethu, i-exclusive ubudlelwane phakathi ezimbini abantu abo nokwazi ngamnye enye, ukuva i-utsalekoname kwaye bamele kanjalo wafunyanwa jikelele ezininzi ngokufanayo amaxabiso. Ezi zimbini partners abanqwenela projekthi kwi elizayo, bakhe ibali kunye ngokufanayo amaphulo kodwa kanjalo siyazi njani kuloyisa obstacles. Ngokusekelwe ngokubhekiselele kwaye ithemba enye, ezinzima budlelwane lakhelwe mini emini. Kwi ixesha elide, ezi partners unokugqiba ukwenza zabo union final kwi-founding usapho kwaye okanye iqumrhu a zasekuhlaleni umthetho ezifana umtshato. I-partners basemazweni inkqubo yokwakha a solid kwaye oluzinzileyo ngokusekelwe franchise, inkululeko, inyaniso ngokunyaniseka. Neqabane, iinkcukacha ezithile ngokucacileyo abonisa ukuba izinto zinako kokuya kwi ilungelo icala. Ezi mpawu baba ngaphezu ngokwaneleyo ukuze bazi ukuba wena umlingane wakho ingaba ilungile kuba ezinzima budlelwane. A romanticcomment budlelwane ibandakanya necessarily a ukuzinikela umlingane wakho. Mna”thina”ndiza mhlawumbi eyona obvious kwaye uninzi cacisa, ikuvumela ukuba ukwazi ukuba umlingane wakho ingaba uzimisele ukusebenza ngendlela ezinzima budlelwane. Ebomini yonke imihla, lowo ayisasebenzi uziva ngathi usasebenzisa kuphela, kodwa lowo okanye yena kuquka nawe ngaphezulu ekwenzeni izigqibo ezibalulekileyo. Umlingane wakho sele ucinga esilandelayo vacation kunye, ibandakanya wena kuyo ibali lakhe, uthetha malunga nawe yakhe wayemthanda nezinamandla, kwaye imagines yayo elizayo yakho macala. Zonke ezi iinkcukacha kuvavanya ukuba iqhotyoshelwe ukuze kwaye uba kuwe.
Ukuba umlingane wakho insists uyabona, ufuna ukuthumela imiyalezo rhoqo, okanye ufuna kunibiza kwi-ngokuhlwa, oku kubonisa ecacileyo umqondiso ukuzinikela ngomhla wakhe isiqingatha. Lowo okanye yena ufuna ukuchitha ixesha kunye nawe kwaye enza iinzame ukubonisa wena uyazi kuyo.
Umlingane wakho unako ngokuqinisekileyo get kuwe
Kuxhomekeke imeko, uyazazi njani ukwenza kuni yakhe ukubaluleka kwaye lilawula iilwandle ndonwabe ixesha lakhe phakathi kwenu wakhe, umhlobo okanye (e) s. Oku ungqina ukuba ngokwenene umnqweno ukuqeqesha nani a ezimbalwa yomelele kwaye durable. Siyazi ukuba umlingane wakho ufumana ukucinga kuni, kuthetha kakhulu. Kodwa akuvumelekanga ngokwaneleyo ukuthi”mna uthando wena”njengoko amaxesha amaninzi kangangoko ufuna kuvavanya i-veracity yakho izimvo. Umele uyazi kanjalo njani ukubonisa oko yi-abancinane izinto.
Amazwi enu aya kuba ngoko, kokukhona unyanisekile
Umzekelo, umlingane wakho unako bonisa affection kwi-wonke. Lowo okanye yena akakwazi fihla ukuba uthathe ngesandla okanye subtly asazanga ngaba akukho mcimbi into, indawo, imeko okanye ehlabathini jikelele. Kuxhomekeke temperament yakho iqabane lakho, ukuba lowo ihlala inyaniso kuye kwi-ubekho, oku kubonisa elungileyo umqondiso ukuzinikela kwi ezinzima budlelwane. Kuyimfuneko ukuba ukumbule ukuba awunokwazi umkhosi nabani na ukuba uhlale kunye nawe. Ngokufanayo umele ungaze bazive trapped kwi budlelwane.
Kwezi zimbini iimeko, akukho real ezinzima budlelwane
Enyanisweni, omnye kuqala uchaza a budlelwane nge ezisisiseko ukulingana phakathi inkululeko kwaye iqela umsebenzi, imeko, apho kukho kanjalo malunga ngamnye ezinye izithuba ngamnye. A ezinzima budlelwane ifuna nomdla-mali egameni lakho inxalenye kwaye umlingane wakho. Kubalulekile ngoko ke kuyimfuneko ukwazi ukuba abe ukulungele ukwenza ulungelelwaniso ngokunxulumene neemfuno ye-ezimbalwa. Ukuba uva oku ungqinelwano respected kunye umlingane wakho, ke, ukuba yakho ezimbalwa ifomu egqibeleleyo eharmony, esibizwa ubungqina a ezinzima budlelwane kwaye lasting. Ngaba ibalulekile into kwi ezinzima budlelwane ngu ukuphepha enokwenzeka misunderstandings. Unxibelelwano phakathi kwenu kwaye umlingane wakho yenza enkulu indima ebalulekileyo budlelwane. Ukuba umlingane wakho wakhumbula ezincinane iinkcukacha elidlulileyo iincoko, lowo okanye yena ubonisa yakhe emamele kwaye ukubhatala ingqalelo. Elungileyo unxibelelwano kuya kusinceda ukuba ubeke nawe ngomhla wawuphungula kunye umlingane wakho. Abaninzi budlelwane nabanye kusilela ikakhulu ngenxa yeengxaki ukuzinikela, ukukholosa kodwa kanjalo iingxaki ka-unxibelelwano. Ezilungileyo unxibelelwano kunye umlingane wakho ke nomdla umqondiso of trust kunye nokuzinikela kwi ezinzima budlelwane. Ukuba bazimanye uthando, kubalulekile ukuba uzive uzalisekisiwe. Oku eyona ndlela bonisa ngokwendlela yayo eyona ukukhanya ukutsala icacile, kwaye ngubani owaziyo, bahlangana umntu okanye namanani umfazi. Kanjalo, thatha ixesha kuphuma, kuba asele emva kokuba umsebenzi umzekelo. Ezi zezinye olugqibeleleyo amathuba ukuhlangabezana icacile. Unako kanjalo sayina kwi dating site ezinzima njenge Bomgangatho Icacile, nto leyo ebalulekileyo entsha yakho uphendlo kuba ezinzima budlelwane. Noko ke sidinga nabo basebenzise umonde nkqu ukuba ezinzima budlelwane yi kubudlelwane apho, eneneni, ngaphezu a phupha, akuvumelekanga ukuba wakha kunye elula show ye-fingers. Yena ucela, kwi ephikisana, unyamezelo abanye ukuzinikela ke ukuze uphumelele ngokwenene. Bomgangatho Icacile ukuba akuncede yakho uphendlo kuba ezinzima budlelwane. Eneneni, amalungu ethu ingaba inxalenye inkqubo intlanganiso, oluzinzileyo authentic. Ukongeza, enkosi personality uvavanyo ingcali kwezenzululwazi, nisolko ethile ukuya kuhlangana ithelekiswa icacile ukuba wabelane yakho efanayo neminqweno. Linda akukho ngaphezulu, bhalisa kwi-Bomgangatho Icacile ukuba nako ukugqiba i-personality uvavanyo ukuhlangabezana yakho enye nesiqingatha
← Arab Ividiyo Dating: ividiyo incoko kwaye i-intanethi personals. Isibhozo ithoba anesibhozo girls ingaba ulinde wena. (Isifrentshi Isifrentshi)
Nesiarabhu amazwe awunokwazi kuba a ezinzima budlelwane, kuyinyaniso. I-Intanethi Dating →
© 2020 Ividiyo incoko ye-Arabian